Sida loo rogo ama YouTube in regelingen Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo rogo ama YouTube in regelingen Mac (El Capitan ka mid ah)
YouTube waa website-ka video geeyo ugu caansan adduunka. Dhowr qof ayaa soo booqan YouTube iyo soo bixi videos YouTube keliya ma aha ee daawaday YouTube videos offline, laakiin sidoo kale inay soo saaro music ka YouTube videos. Haddii aad dhibaato ku qabto in diinta YouTube in regelingen Mac, qodobkan gabi ahaanba waa kugu habboon.
Si aad u soo saaro regelingen audio ka YouTube files on Mac, waxaan u isticmaali awood Video Converter u Mac , oo Macdan kartaa YouTube videos in qaabab audio ugu caansan ay ka mid yihiin MAV, MP3, AAC, iwm leh tayo audio wanaagsan. Soo socda waa tutorial faahfaahsan oo ku saabsan sida loo badalo YouTube in regelingen Mac la wanaagsan Mac Video Converter.
Talaabada 1: Download iyo rakibi YouTube si regelingen Video Converter u Mac
Tani Video Converter weyn u Mac waxaa laga heli karaa halkan. Waxaad ku heli kartaa adigoo gujinaya download ka link hoos ku qoran. Ka dib markii la rakibey, kaliya waxa maamula.
Talaabada 2: Open YouTube videos ee YouTube in regelingen Converter Mac
Waxaad hayso laba dariiq oo dajiyaan YouTube videos in app this. Just jiidi oo hoos u videos YouTube aad Mac in ay ama u tag File "> dar Video Files" inaan sameeyo shaqadaan.
Talaabada 3: Dooro regelingen sida qaab wax soo saarka
Hit icon qaab in la furo liiska qaabka wax soo saarka ah. Regelingen Select ku jirta qeybta Audio ah.
Talaabada 4: Ku bilow si loogu badalo YouTube in regelingen Mac
Hadda, waxaad u baahan tahay riix badhanka loogu badalo in ay sameeyaan YouTube inay diinta ka regelingen Mac. Dabcan, aad ha karo app this ordo ee asalka ah. Muddo ka dib, waxaad ka heli kartaa file maqal ah la regelingen kordhin.
Iyada oo ay taasi smart YouTube in regelingen Mac Video Converter , waxaad qaadan kartaa content dhameystiran audio ka mid ah YouTube videos si fudud, iyo sidoo kale leh tayo audio wanaagsan. Just leeyihiin isku day ah!
MacSoft: Shadow Warrior u Mac